Cloud MOLOCO: Vahaolana adin'ny finday ampiasain'ny AI ho an'ny fampiharana finday | Martech Zone
MOLOCO Cloud dia sehatra mividy mandeha ho azy ho an'ny fanisana doka manerana ny fifanakalozana fandaharana sy ny tambajotran-doka anaty fampiharana. Ankehitriny dia azo ampiasaina ho toy ny sehatra mifototra amin'ny rahona ho an'ny mpivarotra fampiharana rehetra, MOLOCO Cloud dia ampiasain'ny teknolojia fianarana milina manan-kery izay manome fahefana ny mpivarotra finday hampiasa ny angona voalohany sy ny famantarana avy amin'ny sehatra manerana ny tontolo iainana programmika mba hanatsara ny fanentanana doka miorina amin'ny karazany maro. metatra fampisehoana.
MOLOCO Cloud Features dia misy
fifanakalozana - mahatratra ny fifanakalozana doka finday ao anatin'izany ny MoPub (orinasa Twitter), Fyber, Vungle, AdColony, Chartboost, Tapjoy, LINE, ary maro hafa.
Bid Optimizer - fitaovana vaovao manitsy ny volan'ny bidin'ny vidin'ny vidiny voalohany amin'ny fotoana tena izy mba hahafahan'ny mpanao dokam-barotra manatratra ny tanjon'izy ireo na dia mahazo antoka aza fa tsy mandoa vola be.
Fizarana fandaharana - manitsy ho azy mba hampitomboana ny fipihana, ny fiovam-po, ny fametrahana, ny hetsika ao anaty app, ny fandaniana amin'ny fandaniana doka, na ny tanjona napetraky ny dokam-barotra.
Ferana ny kendrena amin'ny fanarahana ny doka (LAT) - mamela ny mpivarotra mikendry ny fitaovana iOS sy Android izay nahatonga ny LAT, na dia tsy nisy aza ny angon-drakitra fanaraha-maso doka. Ny endri-javatra dia miasa amin'ny alàlan'ny fikendrena ireo mpampiasa mifototra amin'ireo mari-pahaizana mifototra amin'ny fizotran'ny fampiharana ankehitriny, ny toetoetran'ny fitaovana, ny angon-drakitra haavon'ny fampiharana, ary ny masontsivana hafa, izay azo alaina amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ireo loharanom-pahalalana mifototra amin'ny SDK toa an'i Fyber. Ny Tracking LAT dia ahafahan'ny mpivarotra mitazona fahombiazana na dia efa nanao ny mampiavaka azy ho an'ny mpanao dokam-barotra aza i Apple (IDFA) misafidy fa tsy misafidy ho an'ny mpampiasa.
MOLOCO Cloud dia mamela ny mpivarotra finday hamantatra ny mpijery mety hamerina ny fiverenany amin'ny orinasan-dry zareo manerana ny tambajotran-doka fampiharana an-tserasera sy tsena:
Ampitomboy ny hafatrao amin'ny fampiharana finday 2.5 tapitrisa
Mahatratra 4 miliara mahery ny fitaovana eran'izao tontolo izao ary mitombo userbase manatsara
Mahazoa mpampiasa, mamerina mamorona, mampiditra indray, manolotra ary manome lanja ny lanjan'ny androm-piainana.
Mamely ny fiverenana sarotra amin'ny fandaniana doka (ROAS) lasibatra amin'ny famoahana ny herin'ny angon-drakitrao
Ny mpivarotra fampiharana dia manana fifehezana tanteraka ny asa fanaovana dokambarotra fandaharana miaraka amin'ny mangarahara amin'ny angon-drakitra fampielezan-kevitr'izy ireo sy ny zava-bitan'izy ireo, ao anatin'izany ny angon-drakitra haavo avo lenta izay tsy zarain'ny sehatra ilana fitakiana hafa.
Manomboha amin'ny Cloud MOLOCO
Tags: fifanakalozana dokaAdColonyaifahaizana artifisialybid optimizermividy doka entanin'ny datafibretambajotran'ny doka anaty fampiharanadokam-barotra amin'ny fampiharanalat kendrenaferana ny kendrena fanarahana dokaltvfianarana milinavahaolana momba ny doka findaydoka fampiharana findaydoka amin'ny findayMolokarahona molocodokambarotra fandaharanamiverina amin'ny fandaniana dokaroastapjoy